Koyyee-Faccee: TAABOTA 44 ture Amma 45 f olgudatee Jira. Kichuu
HomeAfaan OromooNewsKoyyee-Faccee: TAABOTA 44 ture Amma 45 f olgudatee Jira.
#Koyyee #Faccee: TAABOTA 44 ture Amma 45 f olgudatee Jira.
Namicha sobee lafa qote bulaa keessa #Taabota kaa’ee Taabotatu Samii irraa gadi bu’e jedhee iyye.
Mataa isaa irra maaltu jiraa?
Suuraan ni dubbata.
Silaa wantoota akkanaa warruma hordoftoota amantichaattu of irraa balaalefatuu qabaa ture
Bulchiinsii magaalaa FINFINNEE fii POLISNII magaalichaa waan gaarii jajjabeefamuu qabu godhan.
Bulchiinsii Finfinnee yeroo murtaayeef heyyama malee Finfinnee keessattii wal gahiis ta’ee, hiriira nagayaa qaamnii kamiyyuu adeemsiisuu hin danda’u jechuun ibsa gahaa torbaanota LAMEEN darban keessatti uummataaf dabarsanii jiru.
Qaamnii kana cabsee humnaan Ittii aboomee ibsa laachuuf wal gahii yaamu yakka rawwateeraatii dhorgamuu qofaa mitii silaa hidhamuus qaba ture.
Warra dhorgame kana, yookin warra waraqaa seeraa Bulchiinsa magaalatti irraa hin qabne deegaruun siyaasa kamiifuu fudhatama hin qabu.
Warrii siyaasaaf warra seera cabse deeggarre jettan karaa kamiin akka ta’e mee nuuf ibsaatii uummata amasiisaa…..